एनएमबी बैंकले तोड्यो डिफल्टरको कब्जा - एनएमबी बैंकले तोड्यो डिफल्टरको कब्जा
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २ मंसिर, 11:05:48 PM
काठमाडौं । बैंकले लिलाममार्फत सकारेको आफ्नै जग्गा पूर्णकब्जामा लिन नै चार बर्ष लागेको छ । झट्ट सुन्दा अनौठो लाग्ने यो घटना राजधानीको मुटु मानिने कमलादी काठमाडौं मै भएको हो ।
घटना आज दिउँसो २ बजे तिरको हो । काठमाडौंको कमलादीमा रहेको करिब ५ रोपनी जग्गा एनएमबी बैंकले ४ बर्ष अघि नै बैंकमार्फत लिलाम बढाबढमा सकारेर खरिद गरेको थियो । तर उपभोग गर्न भने पाएको थिएन । करिब ५९ करोडमा खरिद गरेको उक्त जग्गामा बैंक डिफल्टर राकेश अडुकियाले जबरजस्ती कब्जा जमाएर बसेका थिए । अझ उक्त जग्गामा उनले २२ तले अत्याधुनिक जेसीबी फाइनान्सियल टावर बनाउने भन्दै ठेक्का पनि लगाइसकेका थिए । अदालतमा मुद्दा दायर गरेर हलो अड्काइरहेका अडुकियाले एपीएम कन्स्ट्रक्सन एण्ड विल्डर्स प्रा.लि. लाई ठेक्का दिएर निर्माणको काम गराइरहेका थिए । सोही जग्गामा आज एनएमबी बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंको विशेष पहलमा कब्जा मुक्त गर्न सफल भएको छ ।
नेपाल बहसका प्रतिनिधि घटनास्थल पुग्दा त्यहाँ बैंकको तर्फबाट गरुड सेक्युरिटीका सुरक्षा गार्डहरु सुरक्षार्थ तैनाथ थिए भने एपीएम कन्सट्रक्सनका कर्मचारीहरु पनि गेट बाहिरै बसिरहेका थिए । कन्सट्रक्सनका कर्मचारीहरु भन्दै थिए प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा डोजर लगाएर टहराहरु भत्काइयो र हामीलाई बाहिर निकालियो । बेसमेन्टको काम सम्पन्न भइसकेको थियो । हाम्रो साहुको १०–१२ करोड लगानी फस्यो । नेपाल बहसले मोबिलाईजेशन लिनुभएको थिएन र ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले बिना मोबिलाईजेशन नै ठेक्काको काम सुरु गरेको दाबी गरे ।
राजेश अडुकिया कुनै समयका नम्बर वान शेयर खेलाडी हुन् । एक समय धन्नै–धन्नै निर्मल प्रधानलाई पनि माथ गर्न सफल ठहरिएका अडुकियाले कृषि प्रेमुरा नामक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी खोलेर शेयरमा अन्धाधुन्द लगानी गर्दै आएका थिए । उनको दूर्दिन २०६४÷६५ पछि तत्कालिन गर्भनर युवराज खतिवडाले घरजग्गा तथा शेयर लगानीमा कडाई नीति लागू गरेपछि सुरु भएको थियो । सोही बेला गोर्खा विकास बैंक काण्ड मच्चिएपछि अडुकियाको ओह्रालो लाग्ने दिन सुरु भएको थियो । अडुकिया खेतान ग्रुपका नजिकका नातेदारका रुपमा पनि परिचित छन् ।
२०७५, २ मंसिर, 11:05:48 PM